Qarax khasaaro gaystay oo ka dhacay degmada Ceelwaaq – Xorriya Online
Qarax khasaaro gaystay oo ka dhacay degmada Ceelwaaq
Warar aanu ka heleyono ayaa sheegaya in qarax khasaaro isugu jira dhimasho geystay uu Maanta ka dhacay degmada Ceelwaaq ee Gobolka Gedo,kaas oo laga maqlay xaafadaha kala duwan ee degmadaas.
Qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu Aaso ayaa la dhigay Maqaayad ku taalla degmada Cabudwaaq oo ay ku sugnaayeen Askar iyo dad Shacab ah,waxaana goobjoogayaal ay sheegeen in qaraxa ay ku dhinteen laba Ruux halka ay ku dhaawacmeen Saddex kale.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Saddexda qof ee qaraxa ku dhaawacantay la geeyay Isbitaalka degmada Ceelwaaq si halkaasi loogu daweey.
Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda Soomaaliya ayaa waxaa la sheegay inay howlgallo ka sameeyeen xaafadaha iyo wadooyinka ku dhow dhow halka uu qaraxa ka dhacay, iyada oo warar la helay ay sheegayaan in dad loo qabtay qaraxaas.
Si kastaba Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa waxaa degmooyin ka tirsan Gobolka Gedo kusoo kordhay falal amni darro, iyada oo ay ka dhaceen weeraro iyo qaraxyo ka dhashay khasaaro dhimasho iyo dhaawac ah.
Guddiga Soomaaliya ku matalaya kiiska badda oo u duulay xarunta maxkamadda cadaaladda Hague
DF oo ku dhawaaqday in dalku ka jiro “nooc cusub oo COVID-19 ah” xilli tirada dhimashada kasii dareyso
Midowga musharaxiinta mucaaradka oo farriin kale oo kulul u diray beesha caalamka
Muuse Biixi oo shacabka Muqdisho ku tilmaamay kuwo ku hoos nool afduub
Dowladda Soomaaliya oo soo rogeysa ganaax ku aadan xirashadda Af-xirka